Macluumaad iyo taageero ku socda xigtada - Krisinformation.se
TB6 Anhöriga So
Corona awgiis wey adkaan kartaa in nolosha dhammaadkeeda xigtada lala kulmo. Xitaa duugista waxaa dhici karta in aan iminka loo fulin sidii loo qorsheeyay. Sidaas darteed ayaan ururinnay macluumaad iyo talooyin ka kala socda qeybaha bulshada ee xaajadu ka go’do.
Uppdaterades 5 mar 2021 15:57
Booqashada guryaha dadka waayeelka
Waxay Folkhälsomyndigheten mamnuuci kartaa booqashooyinka guryaha hoyga gaarka ah ee waayeelka. Waxay taasi shaqeynaysaa ilaa 31 maayo 2021.
La xiriir guriga waayeelka ee ay khuseyso si aad ugu ogaato waxa booqashooyinka khuseeya. Qofka waxqabad wada ayaa mas'uul ka ah inuu hubiyo inaanu fayrusku soo galin oo uuna dadka degan iyo shaqaalaha ku faafin. Dadka qaraabada iyo dadka degan ayay sidoo kale mas'uuliyada ka saran tahay si loogu xadido faafitaanka fayruska.
Folkhälsomyndigheten waxyaalaha ku saabsan si looga hortago faafitaanka marka la booqanaayo guryaha dadka waayeelka
Macsalaameynta ugu dambeysa dhimashada ka hor
Iyadoon sababta dhimashada la eegeyn sida talooyinka Hey’adda caafimaadka bulshada ku cad ma jiraan wax xigtada ka reebaya in ay marka ugu dambeysa macsalaameeyaan qofka dhimanaya. Xigtada rabta in ay goobta sagootin shakhsi ah ku qaataan waxaa loo sheegi doonaa ruutiinnada jira iyo haddii ay u baahanyihiin in ay qaataan qalab difaac oo shakhsi ah. Khatarta ah in qof dhintay laga qaado covid-19 waxaa loo arkaa in ay yartahay.
Laga bilaabo 24 Noofambar 2020 waa inay keliya sideed qof ay ka qeybqaataan isku imaadyada/isku ururida dadweynaha iyo kulamada guud. Go'aanku waxa uu sii shaqeeyo doonaa ilaa muddo. Waxa laakiin ka reebanaan loo sameynaaa aaska. Halkaas waxa la oggol yahay ugu badnaan 20 ka qeybqaate.
Laakin waxaa jirta si uu qofku ku macsalaameyn karyo xigtada iyo qofka uu jecelyahay xitaa iyadoo xaalado ad-adag lagu jiro iminka.
Kaniisadda Iswiidhan waxay xigtada kula talineysaa in ay sameeyaan ducooyin aasitaan ama tacsi yar oo la duubayo, toosna loogu baahinayo baraha bulshada. Haddii horbaba meydka la gubay wey dhici kartaa sidoo kale in ducada aasidda ama tacsida dib loo dhigo oo gadaal dambe laga dhigto. Duugista iyo xafladaha sagootinta ee dhaqamada kale ee aysan kaniisadda Iswiidhan qabaneyn, kala hadal urur diimeedkaaga. Marka laga hadlayo aasidda madaniga ah waa Kaniisadda Iswiidhan, ama mararka qaarkood degmada, cidda kuwaas mas’uulka ka ah.
Ma jiraan tallaabooyin badbaado oo gaar ah si loo maareeyo alaabta guriga
Cidda wax ka qabaneysa alaabta guriga cid la hubiyay in ay u dhimatay covid-19 uma baahna in ay qaaddo tallaabooyin badbaado oo aan ka hayn kuwa caadiga ah - adeegso goolafyada gacmaha ee hal mar la isticmaalo, gacmahana ku dhaq saabuun iyo biyo.